Donald Trump mar dambe ma qoro | Apg29
Madaxweynaha Mareykanka ayaa si joogto ah looga joojiyay Twitter
Tani waa tan Twitter-ka Donald Trump ee la hakiyey uu u eg yahay hadda.
Donald Trump wiilkiisa Donald Trump Jr ayaa bartiisa Twitter-ka ku dhaleeceeyay go’aanka lagu xiray aabihiis.
Waxaan u maleynayaa wixii dhacay markii taageerayaasha Trump ay weerareen Capitol-ka magaalada Washington, USA, inay ahayd wax xun, oo si xun ayaanay aniga ii saamaysay
Haatan Twitter-ka ayaa si joogto ah u xiray Donald Trump barnaamijkooda.
Facebook, Instagram iyo Snapchat ayaa iyaguna xidhay akoonada madaxweynaha si aan xad lahayn.
Intaas waxaa sii dheer, Donald Trump wuxuu lahaa xisaabaadyo iyo barnaamijyo idaacadeed oo laga joojiyay adeegyada fiidiyowga ee Twitch iyo Tiktok.
Twitter wuxuu sharxayaa qoraal uu ku qoray boggiisa sababta ay u xireen madaxweynaha:
Sidan ayey ku tiraahdaa iswiidhishka sida ku cad tarjumada Google:
Kadib markaan si taxaddar leh dib u eegis ugu sameynay fariimihii ugu dambeeyay ee ka soo baxay koontada @realDonaldTrump iyo macnaha guud ee ku hareeraysan - gaar ahaan sida loo qaabbilay iyo sida loogu fasiray Twitter-ka iyo banaanka - waxaan u xirnay akoonka si joogto ah sababo la xiriira halista sii kicinta rabshadaha.
Taasi waxay tiri, maxaa dhacay markii la weerarey Capitol waa wax laga naxo, laakiin runti ma wuxuu ahaa Madaxweynaha ku baaqay rabshadaha?
Wiilka Donald Trump Donald Trump Jr ayaa bartiisa Twitter-ka ku dhaleeceeyay go’aanka lagu xiray aabihiis:
Waxaan ku noolnahay Orwell 1984. Xorriyadda hadalka kama sii jirto Mareykanka. Waxay ku dhimatay tikniyoolajiyad weyn oo wixii haray waxaa u jooga oo kaliya dad kooban.
"Sidaas darteed ayatollahs iyo maamulada kale ee kali taliska ah waxay lahaan karaan akoonno Twitter-ka ah tallaabo la'aan inkastoo ay ugu hanjabayaan waddammada oo dhan xasuuq iyo dila khaniisiinta iwm ... laakiin madaxweynaha Mareykanka waa in si joogto ah shaqada looga joojiyaa. Mao wuu ku faani lahaa."
U soo ducee xaaladda Mareykanka. U soo ducee inay dadku u soo jeestaan ​​Ciise oo ay aqbalaan. Isagu waa kan keliya ee badbaadin kara oo wax bixin kara. Mar labaad, waxaa la muujiyey in hoggaamiyeyaasha siyaasadda qaarkood aysan badbaadin karin oo badbaadin karin dadka.
Midka ay tahay inaad aaminto
Qaarkood waxay u arkeen Donald Trump inuu yahay nin Ilaah oo uu sawiray muddooyinkii u dambeeyay. Laakiin haddii aan dadka aaminno, si xun ayaan u niyad jabi doonnaa, sida aan u malaynayo in kuwa badani hadda noqdeen.
Ninka Ilaahay soo bandhigay muddooyinkan dambe ma aha Donald Trump, laakiin waa Wiilkiisa keliya ee dhashay, Ciise Masiix. Isagu waa ninka Ilaah waana Badbaadiyaha. Waa Ciise waa inaad ku kalsoon tahay, ka dibna waligaa ma niyad jabi doontid.
V 02, söndag 17 januari 2021 kl 07:27